I-OUKITEL iveza uluhlu lwayo olutsha lweefowuni eMWC | I-Androidsis
I-OUKITEL yenye yeemveliso ezininzi ezikhoyo kwi-MWC 2019. Kumsitho obuse-Barcelona, ​​inkampani yazisa ngee-smartphones zayo ezintsha, eziza kuphehlelelwa ezivenkileni kwiiveki ezizayo. Phakathi kweemodeli esele sikwazi ukuzibona kumsitho zii-K9 kunye ne-K12, ezimbini zeemodeli ezintsha kolu luhlu oluvela kumenzi waseTshayina.
Kunye nabo, i-OUKITEL isishiyile ne-C13 Pro kunye ne-C15 Pro.Ngoko ke kwezi ntsuku bezisa izinto ezininzi ezintsha, Bathembisile ukuba bazakufika kwintengiso ngexeshana elifutshane lonke ihlabathi
I-brand iyazi malunga neendlela zentengiso. Singayibona kwiimodeli ezintsha zoluhlu lwe-OUKITEL K. I-K9 ifika nescreen esikhulu, 7,12 intshi enotshi emile okomileyo. Ngaphakathi kwayo sifumana ibhetri engama-6.000 mAh eya kuthi ngokuqinisekileyo inike inkululeko enkulu. Ukongeza ekubizeni ngokukhawuleza. Le modeli iza kuphehlelelwa ezivenkileni ngoMeyi.
I-OUKITEL K12 inokuninzi okufanayo kunye nomzekelo. Kwimeko yakho, iza nescreen se-6,3-intshi ngesisombululo esigcweleyo seHD +. Umva wefowuni wenziwe ngofele. Ibhetri yayo inkulu, inomthamo we-10.000 mAh, ukongeza ekubeni nentlawulo ekhawulezayo, njengoko iqinisekisiwe yinkampani.
Kwelinye icala basishiya nolunye uluhlu olutsha, i-OUKITEL C. Kuyo sineC13 Pro, eza nescreen se-6,18-intshi nge-notch. Ngaphakathi silindele iprosesa yeMediaTek MT6739, 2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina, esinokuthi sandise ukuya kuthi ga kuma-64 GB. Ibhetri yi-3.000 mAh kwaye sinekhamera yangaphambili ye-5 MP. Iza nePie ye-Android ngokwasekhaya.
Enye imodeli kolu luhlu yi-OUKITEL C15 Pro. Inesikrini see-intshi ezingama-6,088 ngobukhulu, ngesisombululo see-pixels eziyi-1280 × 600. Kule meko isebenzisa iprosesa yeMediaTek MT6761, ehamba ne-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina. Iikhamera zangasemva ziilensi ezimbini ze-8 MP kwaye ngaphambili kukho enye ye-5 MP. Iya kuba nebhetri ye-3.200 mAh kunye ne-Android 9.0 Pie yemveli.
Kungekudala siza kuba nedatha entsha ekusungulweni kwezi fowuni. Nangona ukwazi okungakumbi ungandwendwela iwebhusayithi yenkampani, apho kunokwenzeka ukuba uhlale usesikhathini nazo zonke iindaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL iveza iifowuni zayo ezintsha kwi-MWC